Ukusindisa ubomi yayiyeyona njongo yaseTshayina ngasemva koncedo lwehlabathi, uWang uthi
I-China inikezele ngoncedo kwamanye amazwe ukuba alwe i-COVID-19 ngeenjongo zokuzama ukusindisa ubomi obuninzi kangangoko kunokwenzeka, u-Ceba wase-US kunye noMphathiswa Wezangaphandle u-Wang Yi ngeCawa.
Kwinkomfa yeendaba ebibanjelwe ecaleni kwesahlulo sesithathu seNkomfa yaBantu yeShumi elinesixhenxe, uWang uthe iChina ayifuni naluphi na uqoqosho olunomdla kwezonxibelelwano ngalolu ncedo, kananjalo ayizibandakanyi nazintambo zopolitiko kuloncedo.
I-China iqhube kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo iyeyona inkulu yongxamiseko kwezoncedo loluntu ukususela oko kwasekwa i-China entsha.
Inike uncedo malunga ne-150 yamazwe kunye nemibutho emine yamazwe aphesheya, ibibambe iinkomfa zevidiyo ukuba zabelane ngonyango lwezifo kunye namava olawulo kumazwe angaphezu kwe-170, kwaye yathumela amaqela eengcali kwezonyango kumazwe angama-24, ngokutsho kukaWang.
Ikhuphe imaski engama-56.8 yezigidigidi kunye neengubo ezikhuselayo ezizigidi ezingama-250 ukunceda uluntu lwamanye amazwe ukulwa ubhubhane, uWang uthe, ukongeza iChina imi ngokulungele ukuqhubeka nokunceda.
Ixesha lokuposa: Meyi-21-2020